Real Madrid Oo Dalabkii Ugu Horeeyay Ee Rasmi Ah Man United U Diraysa, Mino Raiola Oo Su'aal Cusub La Waydiiyay Iyo Qorshaha Uu Pogba Dhigtay Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Dalabkii Ugu Horeeyay Ee Rasmi Ah Man United U Diraysa, Mino Raiola Oo Su’aal Cusub La Waydiiyay Iyo Qorshaha Uu Pogba Dhigtay Oo La Ogaaday.
Intii lagu jiray 24 kii saacadood ee ugu danbeeyay waxa uu jaho wareer haystay kooxda Manchester United kadib markii uu wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola uu shaaca ka qaaday in Pogba ay ka go’an tahay in uu United ka baxo isla markaana uu qof kasta oo Man United ka tirsani ogyahay.
Laakiin wargayska dalka France ka soo baxa ee L’Équipe ayaa shaaciyay in Pual Pogba uu qorshaystay in uu shaqo joojin sameeyo isla markaana aanu ciyaartoyda kooxdiisa Man United ula safrin Australia.
Ole Gunnar Solskjaer iyo ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ayaa barri u safri doona Australia laakiin Pual Pogba iyo dadka ku dhaw ayaa doonaya in aanu safarkan qayb ka noqon si uu maamulka United cadaadis ugu saaro in bixitaankiisa la ogolaado.
Dhinaca kale wargayska L’Équipe ayaa shaaciyay in maamulka Real Madrid ay ugu danbayn dalab rasmi ah u gudbin doonaan Manchester United iyaga oo dalab 80 milyan yuro ah ka gudbin doona Pual Pogba.
Inkasta oo ay jireen warar sheegaya in dalabka Real Madrid ay diraysaa noqon doono 72 milyan oo lagu daray Gareth Bale ama Isco, waxa uu wargayska L’Équipe sheegay in dalabka rasmiga ah ee Madrid ugu horeeya ee ay xidiga dalkooda France ee Pogba ka gudbinaysaa uu yahay 80 milyan yuro.
Wakiilka Mino Raiola ayuu Get France Football waydiiyay qorshihiisa Pual Pogba wuxuuna iska diiday in uu sharaxaad ka bixiyo hanaanka iyo qaabka uu doonayo in uu xidiga reer France uga saarayo Man United.
Mino Raiola ayaa yidhi: “Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, anigu waligayba aman shaacin hanaankayga , si sahlan ma aha dantayda ciyaartoydayda”.
Wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola ayaa xalay sheegay in halka uu Pogba door bidayaa in ay tahay kooxda Real Madrid waxaana hadda meesha ka baxaysa Juventus oo markii hore tartanka qayb ka ahayd.
Manchester United ayaan la filayn in ay dalabka rasmiga ah ee ay Real Madrid soo wado aqbali doonin maadaama oo ay u arkaan in Pogba qiimihiisu ka badan yahay 100 milyan yuro.
Iyada oo hadda Pual Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola uu midba hal mar saxaafada si cad uga sheegay ujeedadooda, waxay maamulka Man United wali ka aamusan yihiin arintan iyaga oo aan wali si furan uga hadal.
Waxaa la sugyaa dalabka rasmiga ah ee Real Madrid ee 80 ka milyan yuro ku qiimaysan, haddii uu Pual Pogba qayb ka noqon karo safarka Australia ee ciyaartoyda kooxdiisa United iyo xaalada oo sii xumaan karta haddii uu diido in uu safaran qayb ka noqdo.